यौनिकता कज्याउने अनेक दाउ – जलजला अनलाइन
Posted on April 13, 2019 Author जलजला अनलाइन	Comments Off on यौनिकता कज्याउने अनेक दाउ
पितृसत्ता सर्वत्र छ । न त्यसबाट उम्किन सकिन्छ, न त जति खोतले पनि त्यसको जरा निस्किन्छ। भारतीय नारीवादी कमला भासिनले भनेको यो कुरा नेपाली समाजमा पनि लागू हुन्छ।
यो लेख कैलाश राईले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । पितृसत्ताले महिलाका यौनिकता, शरीर, श्रम, भूमिका, सोच, विवाह, प्रजनन शक्तिदेखि उसको व्यक्तिगत–पारिवारिक–सामाजिक–व्यावसायिक सम्बन्ध, पहिचान र कार्यक्षेत्रजस्ता कुराहरूमाथि पुरुषको अधिकार र नियन्त्रण कायम राखेको छ। जसअन्तर्गत महिलाहरू शारीरिक, बौद्धिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छन् त्यसैले उनीहरूमाथि पुरुषको निगरानी, संरक्षण र नियन्त्रणको अनिवार्यता सर्वस्वीकार्यझैं बनाइएको छ।
पितृसत्तात्मक शासनसत्ता र वंश धान्ने समाज निर्माणका लागि जनशक्ति उत्पादन तथा स्याहारसुसार गर्ने र संरक्षणको नाममा आफैंलाई कज्याउने पुरुष जन्माउने दायित्व महिलाको पोल्टामा सुम्पिइएको छ। थप, निश्चित मापदण्डअनुरूप ‘आकर्षक’ र ‘सुन्दर’ हुनु, पुरुषका लागि ‘भोग्य वस्तु’को रूपमा ‘लायक’ ठहरिनु महिलाको अनिवार्य कर्तव्य हो भनिइएको छ।
दर्शन र संस्कारको नाममा, मायाको नाममा, डर र त्रासको नाममा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा असमान लैंगिक व्यवहारहरूको अभ्यास गरेर त्यस्ता मान्यताहरू धानिइएका छन्। लामो अभ्यासहरूमार्फत महिला पुरुषको दाँजोमा हरेक हिसाबले कमसल र तल्लो श्रेणीका हुन् भन्ने कुरा ‘प्राकृतिक’ हो भन्ने भान
नेपाली समाज पितृसत्तात्मक मात्रै छैन। पितृसत्तात्मक हिन्दु दर्शनअनुरूपका मान्यता र प्रचलनहरूलाई नेपाली समाजको ‘साझा’ मान्यता वा प्रचलनका रूपमा व्यापक बनाइएको समाज पनि हो। जसअन्तर्गत पितृसत्तात्मक हिन्दु मान्यताअनुरूप आम महिलाको भूमिका, कार्यक्षेत्रको सीमा र चरित्रको निर्धारण गरी पुरुषको अधीनमा महिला रहनुपर्ने कुरालाई ‘स्वाभाविक’ वा ‘सामान्य’ बनाइयो।
धार्मिक दर्शनको सामाजिक अभ्यासको परिवर्तित चरणहरूसँगै धर्मले पनि पितृसत्ता अँगाल्दै गएपछि महिलामाथि दर्शन र संस्कारको नाममा नैतिक एवं चारित्रिक घेराबन्दी सिर्जना गरियो। महिलाले यौनसम्बन्धी सोच्नु, खुलेर कुरा गर्नुलाई उच्छृंखलता र खराब भनियो। प्रेमी, जीवनसाथी आफंै रोज्नुलाई निर्लज्ज र अमर्यादित भनियो। विवाहपूर्व (हुनेवाला श्रीमान्सँग नै भए पनि) वा बिना विवाह यौनसम्पर्क राख्नु ‘सतित्व’ गुम्नु, ‘अपवित्र’ वा ‘पतित’ हुनु हो भनियो।
बिनाविवाह (चाहे जबर्जस्ती नै भए पनि) गर्भधारण गर्नुलाई ‘कलंक’ र ‘पाप’ हो भनियो। कुमारीत्वको पालना गर्नु, पतिव्रता बन्नुजस्ता निश्चित पारम्परिक संस्कार अपनाउने महिला ‘पवित्र’ हो। सफा, शुद्ध र मर्यादित हो भनियो। महिलाभित्र हुनुपर्ने ३२ गुणहरूको किटान गरी उनीहरूको यौनिकता र सुन्दरताको परिभाषा गरियो।
यौन र प्रेमको मामिलामा नेपाली समाज क्रमिक रूपमा उदार बन्दै गए पनि यस्ता संस्कारजन्य मान्यतालाई पूर्णतः सही मानेर अपनाउने संस्कृति अझैं बलियो छ। महिलाको यौनिकतामाथि अंकुश लगाउन दर्शन र संस्कारको नाममा अनुशासित शासनशैलीको प्रभाव कायम छ। महिलाका लागि निर्धारित नैतिकताको बन्धन सदृश्य र निश्चितझैं बनाइएको छ।
निश्चित मापदण्डअनुरूप ‘आकर्षक’ र ‘सुन्दर’ हुनु, पुरुषका लागि ‘भोग्य वस्तु’का रूपमा ‘लायक’ ठहरिनु महिलाको अनिवार्य कर्तव्य
महिलाको सुन्दरता, शारीरिक बनोट, हाउभाउ, नम्र बोलीवचन, पोसाक, कोमलपन, सेवासुसार, सन्तानोउत्पादनजस्ता कुराहरूसँग आकर्षित हुनु पुरुषत्वका सामान्य लक्षण हुन्। नारीत्वको यस्ता गुणहरूसँग रमाउनु, तीप्रति माया प्रकट गर्नु, तिनको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु र तिनको उपभोग गर्नु पुरुषत्व दर्शाउने उचित तरिका र सीप हुन्। यहाँ, महिलाले महिला हुनुको निर्धारित दायित्व निर्वाह गरेजस्तै पुरुषले पनि पुरुष हुनुको निश्चित दायित्व पूरा गरेर व्यवहार सम्पन्न हुन्छ।
महिला पुरुष एकआपसमा परिपूरकको भूमिकामा रहेर असमान सम्बन्ध र व्यवहारहरूको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो आपसी व्यवहारबाट नजानिँदो गरी अथवा थाहा पाएर वा नपाइकनै महिलालाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था अनुकूलको व्यवहारमा अभ्यस्त बनाउने र नारीत्वको पुनरुत्पादनको काम हुने गर्छ। यो पितृसत्ताको नम्र शैलीको शासन हो। यस्ता सम्बन्धहरू प्रायः माया र समझदारीको नाममा कायम हुने हुँदा यसलाई सुन्दर शब्दमा मायाको शासन भन्न सकिन्छ।
युवती फिर्ता नल्याए आरोपित दलित परिवारका अविवाहित छोरीलाई बलात्कार गर्ने माग सार्वजनिक रूपमा पञ्चायतीमा राखियो। यो घटनाले देखाउँछ, जुनसुकै महिलाको यौनिकता र शरीर पितृसत्तात्मक मानसिकताभित्र पलाएको क्रोध, प्रतिशोध र हिंस्रक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने एक प्रभावकारी माध्यम हो। जहाँ प्रहार गरिएको खण्डमा क्षतिस्वरूप विध्वंस परिणाम निस्कने पक्कापक्की हुन्छ भन्ठानिन्छ। नेपाली समाजमा बालिका तथा महिला बलात्कृत भएमा त्यसलाई पीडितको कोणबाट भन्दा पनि उसको परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जत र ऊ बस्दै आएको समाजको मान्यताअनुरूप बुझ्ने गरिन्छ।
जोसुकैमाथि हुने बलात्कार हरेक कोणबाट अमानवीय हो। बलात्कारीलाई दण्डसजाय हुनु अत्यावश्यक छ। तर महिलाको जीवन जिउने सबै आधारहरूलाई उसको शरीर, त्यसमाथि पनि विशेष उसको योनिमा मात्रै गौण गरेर त्यसलाई क्षतवक्षत पार्ने खतरनाक अस्त्रका रूपमा बलात्कारलाई लिने गरिएको छ। यो विकराल मनोसामाजिक समस्या हो। कानुनी उपचारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तो समस्याको समाधान अपरिहार्य छ ।
हिंसाको जात !
पितृसत्तासँग धर्म, लिंग, यौनिकता, जातजातीयता, वर्ग र नश्लको गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको विविध नेपाली समाज भएकोले यहाँ प्रेम र यौन स्वतन्त्रता उपभोगको संस्कृति र अभ्यासमा पनि भिन्नता छ। तैपनि महिलाका हकमा प्रेम र यौनलाई संकीर्णतामा खुम्च्याएर त्यसलाई निषेध गर्ने र प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्ने अभ्यासलाई सही मानेर बढावा दिइन्छ। मूल रूपमा प्रेम र यौनवर्जित समाजको परिचय स्थापित छ।
नेपालका तमाम महिलाहरूलाई समान रूपमा त्यस्तो निषेध लागू नगरेरै पनि उनीहरूको यौनिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरिएको छ। निधेषको काँडे तारबारलाई उनीहरूको फरकफरक सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारमा निर्माण गरिएको छ। उनीहरूको भिन्न सांस्कृतिक लैंगिक पहिचान र भिन्न लैंगिक सम्बन्धहरूलाई आधार मानेर उनीहरूको यौनिकताको परिभाषा गरिएको छ। यौनिकतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूमाथि बलियो नियन्त्रण राखिएको छ।
पितृसत्तात्मक हिन्दु दर्शनअनुसार उच्च–हिन्दु–पहाडी समुदायका महिलाहरू राज्य, समाज र परिवारको इज्जत धान्न लायक संस्कारी महिलाको रूपमा उभ्याइएका छन्। जसअनुसार अनुशासन, परम्परा, इज्जत महिलाका नित्य कर्म र जनजीविकाको प्रमुख आधार हुन्। प्रेम, यौन र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू निश्चित अवस्थामा बाहेक प्रायः अनुचित र अमर्यादित व्यवहार मानिन्छ। महिलाले प्रेम र यौनबारे खुलेर कुरा गर्नु अवाञ्छनीय काम गरेको ठहरिन्छ। केटी तथा महिला घरबाहिर एक्लै हिँडडुल गर्नु भनेको असुरक्षित मात्रै हैन अमर्यादित बन्नु पनि हो।
त्यस्तो समाजमा विवाह गर्ने नगर्ने, गर्ने भएमा कोसँग गर्ने, विवाहपश्चात सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने, जन्माउने भए कहिले र कति भन्नेलगायतका कुराहरूमा केटीको स्वनिर्णय र इच्छा कम महत्वको हुनु, प्रेम, यौन र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू अनुचित व्यवहार मानिनु संस्कारगत मान्यता हुन्।
आदिवासी जनजाति महिलाको यौनिकता र शरीरको शोषणको ऐतिहासिकता पनि सुखद छैन। भयावह छ। तिब्बतसँग व्यापार गर्न तामाङ केटीहरूलाई मालसामानसँग साटेर शासकीय समृद्धिको नाममा विनिमयको वस्तु बनाइएको थियो। राणाशासनकालमा काठमाडौं वरपरका तामाङ युवतीहरूलाई ‘रखौटी’को रूपमा दरबारमा भर्ती गरेर शासकको विलासिता पूर्तिको वस्तु बनाइएको थियो। पछिल्लो समयमा बेचबिखनमा पर्ने नेपालका महिलाहरूको टुक्राटाक्री आँकडा (एकमुष्ट तथ्यांक निर्माण नभइसकेको हुनाले) हरूमा आदिवासी जनजाति महिला त्यसमाथि पनि तामाङ महिलाहरू नै बढी देखिनुको बृहत् र गहिरो पृष्ठभूमि हो यो।
rai.kailash@gmail.com स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन्।
ओली-प्रचण्डको यस्तो संकेत
बैशाख १०, काठमाडौं । एमाले-माओवादी पार्टी एकता एकीकृत पार्टीको नयाँ केन्द्रीय समिति र एकतापछि नेताहरूको ‘सम्भावित भविष्य’को खोजीका कारण लम्बिएको ‘घुमाउरो शैली’ मा नेताहरूले नै स्विकारेका छन् । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित संयुक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष […]
चैत १८, काठमाडौं । पानी र असिनासँगै आएको हावाहुरीका कारण आइतबार साँझ पर्सा र बारामा कम्तीमा २७ जनाको ज्यान गएको छ । पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यो खबर अनलाइनखबरमा छ । ठूलो जनधनको क्षतिसँगै प्रश्न उठेको छ, हावाहुरीको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैनथ्यो ? ‘अवश्य सकिन्छ, तर यसका लागि मौसमी राडार चाहिन्छ’, जल तथा […]
‘हिरो’जस्तै सिरियल ठग, यसरी ठगे १० करोडभन्दा बढी सम्पत्ति (नालीबेलीसहित)
असोज ३१, काठमाडौं । प्रहरीमा उजुरी छ । पीडितहरु न्यायका लागि भौतारिइरहेका छन् । उनीहरुको एउटै गुनासो छ, ‘त्यो ठग कहिले समातिन्छ ?’ महँगो कारमा चढ्ने । चस्मा ढल्काएर रवाफका साथ हिँड्ने । लाखको हैन, करोडकै कुरा गर्ने । दोलखा पवटी–३ का जग्गा कारोबारी दिनेश कोइराला झट्ट हेर्दा चलचित्रको नायकभन्दा कम देखिन्नन् । तर, हिरोजस्तै […]